Nyanzvi makumi mana neshanu dzakasimbisa kuvepo kwavo kuRetail Forum 43 ichaitwa muna Kukadzi | ECommerce nhau
Eva maria Rodriguez | | eCommerce, Zviitiko
El Retail Forum 2016 inopisa injini. Makumi mana nevatatu ndivo nyanzvi avo, kusvika parizvino, vakasimbisa kutora kwavo chikamu che9st chemusangano wepagore weVatengesi muSpain uchaitirwa kuMadrid muna Kukadzi XNUMX.
Muzuva rose, rinozoitika muzvikamu zviviri (mangwanani nemanheru), vatori vechikamu vanokwanisa kuenda ku yakasarudzika premium chikamu (mangwanani) uye matanhatu zvekushandisa zvemahara zvikamu (kupararira pakati pemangwanani nemasikati).
1 Strategic Premium Session: «Shopper uye Maitiro: Iyo ramangwana ikozvino»
2 Technical Mahara Zvikamu
2.1 Technical Yemahara Session 1: Yevashandi Zviwanikwa muRetail
2.2 Tekinoroji Yemahara Chikamu 2: Huru Dhata uye Kuvimbika kweVatengi
2.3 Technical Yemahara Session 3: Dhijitari Shanduko
2.4 Technical Yemahara Session 4: Nhau uye Maitiro muKubhadharisa Nzira: Zvinodikanwa zvevatengi vanoda nzira nyowani dzekubhadhara
2.5 Technical Yemahara Session 5: Ecommerce uye Mcommerce
2.6 Technical Yemahara Session 5: Ini ndegral Supply Chain: Logistics Centres. Chain kubatanidzwa uye kudiwa kufungidzira
3 Nyanzvi dzakasimbisa kuvepo kwavo kuRetail Forum 2016
Strategic Premium Session: «Shopper uye Maitiro: Iyo ramangwana ikozvino»
Iyo chete purogiramu yepamberi yezuva, yakanangana nevatungamiriri vese vemakambani nemaECOs, ichagadziriswa kutenderedza musoro wenyaya Shopper uye Maitiro: Iyo ramangwana ikozvino.
Mushure mekugamuchirwa kwevatori vechikamu na9: 30 mangwanani uye kuvhurwa kwekukudzwa (10:00 a.m.), na10: 30 mangwanani boka rekutanga revanyanzvi richasangana kuzokurukura nyaya iyi. Vashanyi vakanaka vanouya kuSpain vari kutsvaga chimwe chinhu chekushandisa. Maitiro ekugadzira zviitiko zvekutenga zvinoenderana nevatengi vanonetsa zvakanyanya?
Mushure mekuronga kuzorora pa11: 15 mangwanani, boka revanyanzvi richasangana zvakare nezvenyaya iyi Inotevera Pfungwa yekutengesa Chizvarwa: Nyowani mafambiro ekushandurwa kwedigital Omnichannel pabasa reVatengesi. Ivo vachataura nezve maitiro ekubatanidza poindi yekutengesa & ecommerce kuti vawane zvirinani mutengi ruzivo uye maitiro ekuisa omnichannel pasevhisi yevatengesi.
Na13: 30 pm musoro wenyaya uchakurukurwa Chiono uye chinangwa cheVatengesi maRetail. Remangwana ikozvino. Pachiitiko ichi, isu tichataura nezvekuti sei vatambi vakachena vachizorega kuvapo, nei makadhi ekuvimbika emapoinzi achawira mukusashandiswa uye nei vatengesi vachizofanira kubatana kuti vazvitsaure ivo pachavo.
Chirongwa ichi chinotarisirwa kupera na14: 30 dzemasikati.
Technical Mahara Zvikamu
Iwo matanhatu akarongwa ehunyanzvi emahara zvikamu emahara kune vatengesi. Iyo yemahara yekuwana technical technical zvikamu zveRetail foramu 2016 anotevera:
Technical Yemahara Session 1: Yevashandi Zviwanikwa muRetail
Pakati pa15: 00 masikati na17: 30 masikati misoro inotevera ichakurukurwa:
Chinhu chevanhu chinoita mutsauko muRetail. Maitiro ekuvaka timu inobudirira kuronga mufananidzo uye basa rekambani. Maitiro ekudzikisira kukanganisa kwekutenderera.
Maitiro ekumisikidza muripo uye mabhenefiti mutemo iyo inokurudzira kutengesa kwepamhepo nekunze?
Tekinoroji Yemahara Chikamu 2: Huru Dhata uye Kuvimbika kweVatengi
Pakati pa10: 00 masikati na14: 00 masikati misoro inotevera ichakurukurwa:
Maitiro ekukwirisa Big Data muRetail kuita monetize data rese ratinaro kubva kune vatengi vedu uye kurishandura rive rekutenga.
Maindasitiri anoona: Ndeapi maturusi aripo ekugadzirisa data revatengi.
Kuvimbika kwevatengi kuburikidza neyakanakisa sevhisi. Matekiniki ekuongorora vatengesi uye kugadzirisa mashandiro avo: Chakavanzika Kutenga, Kuongorora Kwemukati, nezvimwe.
Technical Yemahara Session 3: Dhijitari Shanduko
Retailtainment: Chiitiko chekutenga ndicho protagonist muzvitoro zvepanyama. Nzira yekuzvipatsanura pachedu kubva kumakwikwi edu? Maitiro ekuzvichinjisa iwo kudigital shanduko yechitoro?
Multichannel kune mutengi inokwanisa kuwana kubatana kwe isina internet uye online pasirese: rwendo uye kwainoenda zvakabatana J
Zvigadzirwa zvetekinoroji kutaurirana akakodzera ruzivo, zvinopihwa, kukwidziridzwa kana nhau munzvimbo dzakasiyana siyana: Dhijitari Signage, Dhijitari masitoreti uye Kuwedzera Kwechokwadi. J
Technical Yemahara Session 4: Nhau uye Maitiro muKubhadharisa Nzira: Zvinodikanwa zvevatengi vanoda nzira nyowani dzekubhadhara
Pakati pa10: 00 masikati na12: 00 masikati misoro inotevera ichakurukurwa:
Kubhadhara kunoreva kuti chikamu hachimiri kushanduka, kuenda kune kusangana kukuru nehunyanzvi hutsva. Maitiro ekugadzirisa kubhadhara muzvitoro uye nekudzivirira zvisina kufanira mitsetse?
Ndeapi maitirwo ekubhadhara murunhare? Mari chaiyo inobhadharwa ichawedzera sei? Iwo "swing shopper", vanobatana nedhijitari ekutenga pasiri pamhepo: sei mamireniyoni achiputsa nemitemo yakasimbiswa?
Technical Yemahara Session 5: Ecommerce uye Mcommerce
Pakati pa12: 30 masikati na14: 00 masikati misoro inotevera ichakurukurwa:
Multichannel nemhedzisiro yayo panzira dzekubhadhara: mangani mapuratifomu anokanganisa commerce, ecommerce uye mcommerce kuvimbisa omnichannel kubhadhara
Mapuratifomu ekubhadhara achashandurwa sei kune ese madhivha, achivimbisa kuchengetedzeka uye kudzivirira kuteedzera mukubhadhara. Maitiro ekubatanidza iyo yedhijitari zvakasikwa muzvitoro zveanalogog? Uye mune ecommerce uye mcommerce?
Technical Yemahara Session 5: Ini ndegral Supply Chain: Logistics Centres. Chain kubatanidzwa uye kudiwa kufungidzira
Pakati pa15: 00 masikati na17: 00 masikati misoro inotevera ichakurukurwa:
Bhizinesi nemabhizimusi mikana inowanikwa kune vatengesi: Logistics nzvimbo
Iko kushambadzira kukuru kwezvigadzirwa kunoita kuti zvigadzirwa zviitwe zvine hungwaru uye zvemakwikwi basa. Ndeipi nyaya yakamirira?
Kufanotaura Kudiwa muRetail. Mazano ekuvandudza uye echimurenga. Zvaunofanira kuita nekuwedzeredza: Zvitoro, dzimba dzekuratidzira, nezvimwe.
Nyanzvi dzakasimbisa kuvepo kwavo kuRetail Forum 2016
Parizvino, idzi ndidzo nyanzvi dzakasimbisa kuvepo kwavo kuRetail Forum 2016:
David Ayala Brualla, Mutariri Wekutengesa ku SWAROVSKI
Enrique Aparicio, Bhizinesi Kudzora & Kugovera Director wePARFOIS
Quique Díaz Kutaurirana, Director weMASCARÓ & PRETTY BALLERINAS
Patricia de Anduaga Vázquez, Spain Chief Counselling Chez de SEPHORA
Daniel De Santiago, Ecommerce & Dhijitari Director weLÉKUÉ
María Trigo de Mingo, Mugadziri Wezvigadzirwa weARISTOCRAZY
Ulpiano David González Blanco, On-line Merchandising Manager kuLEROY MERLIN
Gustavo Liras del Olmo, Kushambadzira kwekushambadzira uye Kushambadzira manejimendi kuEROSKI
Verónica Báez, CEO & Muvambi weDESIGNERS ROOMS
Anabel Zamora, Muvambi uye CEO we24FAB.COM
Arturo Molinero Director, HR weCARREFOUR
Santiago L. Benéitez, Global Retail Director wePADELMANÍA.COM
Fernando Barrientos Corporate, HR Management Director weGRUPO DÍA
Jordi Badía, Director weRuzivo Technologies kuVENCA
Javier G. San Miguel, Kushambadzira & E-commerce Director weHOSS INTROPIA
María Sañudo, Marketing Manager Spain kuVENTE-PRIVEE.COM
Iván García Estébanez, SEO Executive & Muongorori weWebhu kuGROUPALIA
Ángel Gil Gallego, Director weLogistics kuPIKOLIN
José Luis Martín Marcos, Director weKushanda kweCASH CONVERTERS
Igor Unzalu Director, Wemabhizimusi / WeVatengi Wekusimudzira Mutevedzeri weMutungamiri weUNILEVER
Yolanda Menal, weNational Human Resources Director weUNILEVER
Miguel Muiños Santos, E-commerce maneja kuCARAMELO
Francisco Pérez, Director weDevelopment uye Zvigadzirwa zve HAWERS
Óscar López Ugarte, Musoro weData kuRASTREATOR.COM
David Barroeta, People Director weOPTICALIA
Javier Pelayo, Wepasi Pese Mutevedzeri Wemutungamiri weMARCO ALDANY
Sandra Zarate, Mutariri weNyika weRAKUTEN SPAIN
Chelo Fernández-Yáñez, Kuburikidza neDhijitari Maneja we L'OREAL LUXE
Pol Lligoña Peidro, Mutungamiriri weRetail Operations kuCASA AMETLLER
Alicia Ortega, Mutengesi uye Wekushambadzira weTUDESPENSA.COM
Vlvaro Vázquez Losada, External Director yeKIABI
Esteban Blázquez, CEO & Co-muvambi weESDEMARCA.COM
César de Vicente, CEO weKIABI
Daniel Tellón, Kushambadzira Director weJUST-EAT SPAIN
Emilio Továr, CIO weTELEPIZZA
Ignacio Sánchez Villares, General Director weLEROY MERLIN
Pedro Reoyo, Kushambadzira Director weAKI BRICOLAJE ESPAÑA
Marta Panera, Director wekunze Kutaurirana & Ruzhinji Hukama Spain, Italy nePortugal uye Kuvandudza Bhizinesi reSHOWROOMPRIVE.COM
Jesús Arce Espada, Director weLogistics kuNECK & NECK
Lina Valdivieso, Musoro weKushanda uye Maitiro paMAKRO
Ismael González, Mukuru weRetail Iberia weADIDAS GROUP
Juan Francisco Sánchez Navarro, Kuongorora Bhizinesi, Kubhadhara & Kubiridzira kuGROUPALIA
Víctor Robira, Director weLogistics kuDECATHLON ESPAÑA
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zviitiko » Nyanzvi makumi mana neshanu dzakasimbisa kuvepo kwavo kuRetail Forum 43 ichaitwa muna Kukadzi